7 Automated Workflows Iyo Inoshandura Yako Yekushambadzira Game | Martech Zone
Kushambadzira kunogona kukurira kune chero munhu. Iwe unofanirwa kutsvagisa vatengi vako vavanoda, kubatana navo pamapuratifomu akasiyana, kusimudzira zvigadzirwa zvako, wozotevera kusvika wavhara kutengesa. Pakupera kwezuva, zvinogona kunzwa sekunge wanga uchimhanya marathon.
Asi haifanirwe kunge ichiremedza, ingo shandura maitiro.
Automation inobatsira mabhizinesi makuru kuti aenderane nezvido zvevatengi uye mabhizinesi madiki arambe akakodzera uye achikwikwidza. Saka, kana usati watora kushambadzira otomatiki, ino ndiyo nguva. Rega otomatiki software itarisire mabasa anotora nguva kuti ugone kutarisa pamabasa akakosha.
Chii chinonzi Marketing Automation?
Kushambadzira otomatiki kunoreva kushandisa software kuita otomatiki zviitiko zvekushambadzira. Mazhinji anodzokororwa mabasa mukushambadzira anogona kuve otomatiki: pasocial media kutumira, email kushambadzira, ad mishandirapamwe, uye kunyange drip mishandirapamwe.
Kana mabasa ekushambadzira ari otomatiki, dhipatimendi rekushambadzira rinomhanya nemazvo uye vatengesi vanogona kupa ruzivo rwemunhu kune vatengi. Kushambadzira otomatiki kunotungamira mukuderedzwa kwepamusoro, kugadzirwa kwepamusoro, uye kuwedzera kutengesa. Zvinoitawo kuti iwe ukure bhizinesi rako nezviwanikwa zvishoma.
Heano mashoma akakosha manhamba ekushambadzira otomatiki.
75% emakambani ese atora kushambadzira otomatiki
480,000 Websites parizvino shandisa kushambadzira otomatiki tekinoroji
63% yevatengesi kuronga kuwedzera yavo yekushambadzira otomatiki mabhajeti
91% vevashambadzi vanotenda kuti kushambadzira otomatiki kunowedzera budiriro yemashambadziro epamhepo ekushambadzira
Kuita kushambadzira otomatiki kunotungamira kune 451% kuwedzera kwevanokwanisa vanotungamira-paavhareji
Paunenge uchigadzira kushambadzira, unokwanisa kunanga vatengi zvakananga, uye bhajeti yako yekushambadzira inoshandiswa nehungwaru uye nemazvo. Kushambadzira otomatiki kunoshanda kune bhizinesi rega rega, uye heano mamwe maitiro ekushambadzira anogona kuve otomatiki nechishandiso chekufambiswa kwebasa.
Workflow 1: Lead Nurturing Automation
Zvinoenderana netsvagiridzo, makumi mashanu muzana ematungamiriri aunoburitsa anokodzera, ivo havasati vagadzirira kutenga chero chinhu. Vanogona kufara kuti iwe unogona kuona marwadzo avo uye kuvhurika kuti uwane rumwe ruzivo. Asi havasati vagadzirira kutenga kwauri. Asi izvo, makumi maviri neshanu muzana chete ekutungamira akagadzirira kutenga zvigadzirwa zvako chero nguva, uye ndiko kuve netarisiro.
Pamwe iwe wakawana anotungamira kuburikidza nepamhepo opt-in mafomu, kutengesa tarisiro, kana timu yako yekutengesa yakawana makadhi ebhizinesi pashow yekutengeserana. Pane nzira dzakawanda dzekugadzira madhiri, asi hechino chinhu: nekuti vanhu vakakupa ruzivo rwavo hazvireve kuti varikuda kukupa mari yavo.
Chinotungamira kuda ruzivo. Havadi kukupa mari yavo vasati vagadzirira. Saka, chinhu chekupedzisira chaunofanirwa kunge uchiita kuvaudza, "Hei kambani yedu ine zvigadzirwa zvakanaka, wadii kutenga!"
Automated lead kusimudzira inobvumidza iwe kufambisa inotungamira kuburikidza nerwendo rwemutengi nekufamba kwavo. Iwe unodyidzana navo, uwane kuvimba kwavo, tengesa zvigadzirwa zvako, uye wobva wavhara kutengesa. Automation inokubatsira iwe kukudziridza uye kuchengetedza hukama netarisiro uye inotungamira pasina kushanda-kwakanyanya kushambadzira kuedza. Iwe unopindirana nevanotarisira uye vatengi panguva yega yega yerwendo rwavo rwekutenga.
Workflow 2: Email Marketing Automation
Kushambadzira email kunobatsira vatengesi kuvaka hukama netarisiro, inotungamira, vatengi varipo, uye kunyange vatengi vekare. Zvinogadzira mukana wekuti utaure navo zvakananga panguva yakavaitira.
Nhamba yevashandisi veemail inofungidzirwa kusvika 4.6 bhiriyoni na2025. Nevazhinji vashandisi veemail, zviri nyore kuona kuti sei kudzoka kwekudyara kubva kuemail kushambadzira kwakakura. Zvidzidzo zvakaratidza kuti pamadhora ega ega akashandiswa pakushambadzira email, avhareji yekudzoka i $1.
Asi email kushambadzira kunogona kuita sekunge kutambisa nguva nekuti pane zvakawanda zvekuita: tsvaga tarisiro, batana navo, tengesa zvigadzirwa zvako, tumira maemail, uye uteedzere. Otomatiki inogona kubatsira pano nekuita otomatiki mabasa anodzokororwa ane hukama nevatengi vehukama manejimendi, zvichiita kuti email kushambadzira ishande.
Iyo email yekushambadzira otomatiki chishandiso inogona kutumira vanyoreri yakakodzera, yakasarudzika, uye ine nguva mameseji. Inoshanda kumashure, ichikutendera kuti ushande pane mamwe mabasa akakosha. Iwe unogona kutumira maemail akasarudzika kune wega wega, kubva kune vatsva vashanyi kudzokorora vatengi.
Workflow 3: Zvemagariro Midhiya Kushambadzira Kushandisa
Kune 3.78 bhiriyoni vashandisi vesocial media pasi rese, uye vazhinji vavo vanopedza maminetsi makumi maviri nemashanu kusvika maawa maviri zuva rega rega pasocial media. Ndosaka vatengesi vazhinji vachishandisa social media kutengesa makambani avo.
Paunenge uchidyidzana nevatengi uye tarisiro pasocial media, unogona kutaura navo munguva chaiyo uye kuwana mhinduro yavo. Vanosvika hafu yevatengi veUS vanoshandisa social media kubvunza nezve zvigadzirwa nemasevhisi, saka kuve neiyo yakasimba social media kuvapo kwakakosha zvakanyanya.
Asi hazvigoneke kupedza zuva rese pasocial media, uye ndipo panouya otomatiki. Unogona kushandisa social media marketing tool kuronga, kushuma, uye kuunganidza mazano. Mamwe maturusi ezvishandiso anogona kutonyora zvesocial media.
Social media marketing automation inosunungura nguva yako, inoita kuti ubatane nevateveri vako uye ubate nhaurirano dzechokwadi. Iwe unogona zvakare kushandisa mishumo inogadzirwa kuronga nezve zvekutumira uye rinhi.
Workflow 4: SEM & SEO Management
Iwe unogona kunge uine makumi kana mazana evakwikwidzi, ndosaka zvakakosha kushambadza pamainjini ekutsvaga. SEM (Search Engine Marketing) inogona kukura bhizinesi rako mumusika unowedzera makwikwi.
SEO (Search Engine Optimization) zvinoreva kuvandudza webhusaiti yako kuti iwedzere kuoneka kwayo kwekutsvaga kwakakodzera pamainjini ekutsvaga. Kunyanya kuoneka saiti yako pamibairo yekutsvaga, inowedzera mikana yako yekukwezva vangangove uye vatengi varipo kubhizinesi rako. SEM inobata pane yakanangwa keyword kutsvaga, nepo SEO inobatsira kushandura uye kuchengetedza inotungamira inogadzirwa neSEM mazano.
Paunogadzirisa SEM uye SEO, iwe unoderedza huwandu hwebasa remaoko raunofanirwa kuita uye nekumhanyisa mabasa anonetesa. Nepo iwe usingakwanise kuita yega yega SEM uye SEO maitiro, pane mamwe mabasa aunogona otomatiki kubatsira kuwedzera kushanda zvakanaka.
SEM uye SEO maitiro anogona kuve otomatiki anosanganisira kugadzira webhu analytics, yekutarisa mazita emhando uye zvinongedzo zvinongedzo, zvemukati kuronga kuronga, kuongorora mafaira elogi, keyword zano, uye yekubatanidza kuvaka. Kana SEM neSEO zvanyatso kupindirana, ivo vanoburitsa yakasimba yedhijitari yekushambadzira mushandirapamwe ine mhedzisiro inooneka.
Workflow 5: Zvemukati Marketing Workflow
Chimiro chega chega chikuru chine chinhu chimwe chinochifambisa mberi: hupfumi hwezvinhu zvakakosha uye zvine chekuita zvinochibatanidza nevateereri vayo. Kushambadzira kwemukati kunoita basa rakakosha mukubudirira kwemadhijitari ekushambadzira mishandirapamwe.
Asi hechino chinhu. Chete 54% yevatengesi veB2B vanoshandisa zvirimo kuvaka kuvimbika nevatengi vavo varipo. Vamwe vese vanoedza kuhwina bhizinesi idzva. Musatipe zvisizvo, kuhwina bhizinesi idzva hakuna kushata, asi tsvakiridzo inoratidza kuti 71% yevatengi vanodzimwa nezvirimo zvinoita senge musika wekutengesa. Saka, pachinzvimbo chekushandisa nguva yakawanda uchitengesera kune vanotarisira uye vatengi varipo, zvaunofanirwa kunge uchiita kuita navo.
Chigadzirwa chekushambadzira otomatiki chishandiso chinogona kuita otomatiki uye kugadzirisa zvinodzokororwa zvemukati zvekushambadzira mabasa. Inobatsira kuvandudza yako yemukati yekushambadzira zano kushanda. Iwe unogona kuona zviri nyore mafambiro azvino mune zvemukati uye shandisa chishandiso chekugadzira pfungwa.
Iine yakanaka yekushambadzira yemukati zano, iwe unovaka kuvimba nevateereri vako, batana netarisiro uye vatengi, gadzira inotungamira, uye uvandudze shanduko. Kusagadzikana kwemukati kunobatsira kambani yako kuti ive yakavimbika, inovaka kuvimba nevatengi, uye inosimbisa bhizinesi rako mukurumbira.
Workflow 6: Marketing Campaign Management
Kana kambani yako iri kuwana mashoma ekutungamira uye kutengesa kwadzikira, mushandirapamwe wekushambadzira unogona kushanda zvinoshamisa. Mushandirapamwe wakanaka wekushambadzira unogona kumutsa kufarira kutsva mubhizinesi rako uye kuwedzera kutengesa. Nekudaro, mushandirapamwe wakabudirira unofanirwa kuve nemhedzisiro inoyerwa-senge yakawedzera kutengesa kana mamwe mabhizinesi kubvunza.
Marketing campaign management inosanganisira kunyatsoronga uye kuita zviitwa zvine chinangwa chekuunza zvibereko zvakanaka zvebhizinesi. Inovimbisa kuti mushandirapamwe unoshandura zvinangwa zvekambani kuita zvinangwa zvinogoneka zvine chekuita nezvinodiwa nevatengi.
Marketing campaign management automation inoita kuti basa remutengesi rive nyore. Semuenzaniso, mushambadzi anogona automate lead inoyerera. Kana tarisiro ichizadza fomu, kutevedzana kwekuedza kwekushambadzira kunotangwa. Maemail anogona kutumirwa otomatiki kusimudzira kushambadzira, kukumbira bhizinesi, kana kukumbira kutengesa.
Workflow 7: Chiitiko Kuronga uye Kushambadzira
Chiitiko chekushambadzira chinotora chigadzirwa kana sevhisi zvakananga kune tarisiro uye vatengi varipo. Inogona kubatsira kuwedzera kuoneka kwechiratidzo pamberi, panguva, uye mushure mechiitiko. Chiitiko chinogonawo kubatsira kambani kuburitsa zvinotungamira uye mikana mitsva. Vatengesi vanogona kusimudzira chimwe chigadzirwa kana chimiro kuti vawedzere kugutsikana kwevatengi, kubatanidzwa, uye kuchengetedza.
Asi chiitiko chese chinobudirira chekushambadzira chinofanira kurongwa nekurongwa nemazvo. Chishandiso chekufambiswa kwebasa chinogona kubvumira vatengesi kuti vagadzirise maitiro ese-kubva pakunyoresa, kukwidziridzwa kwechiitiko, kune mhinduro.
Paunoshandisa zviitiko senzira yekushambadzira, iwe unopa vangangove vatengi kutanga-ruoko kutaurirana nekambani uye kuvabatsira kuziva hunhu hwayo, kutarisa, uye maonero.
Kushambadzira otomatiki kune Huru Impact
Mumusika wepasi rose, zvakakosha kuti bhizinesi rako risimuke kubva muboka. 80% yekushambadzira otomatiki vashandisi taura kukwira kwekutora mutobvu, uye mabhizinesi mazhinji ari kushandisa tekinoroji kuita kuti kuedza kwavo kwekushambadzira kubudirire. Otomatiki inogona kubatsira kubata yega yega yekushambadzira kwako mushandirapamwe-kubva pakutanga kusvika pakupera, ichiita kuti maitiro ese asangane uye asina kunetseka.
Tags: kushandisa michinaemail marketing automationchiitiko kuronga otomatikilead kusimudzira otomatikimarketing automationmarketing automation statisticsmarketing otomatiki statsmarketing campaign automationkushambadzira kufambiswa kwemabasappc manejimendisearch engine marketing automationsearch engine optimization automationyekutsvaga injini yekugadzirisa manejimenditsvaga kushambadzira manejimendiShemuseosocial media marketing automationnhambachii chinonzi kushambadza
Chintan Jain ndiye Associate Director weChigadzirwa Marketing pa Kissflow Workflow, chikuva chakabatana chinogonesa masangano kubata marudzi ese ebasa munzvimbo imwechete. Chintan inyanzvi yekushambadzira inonyora zvakanyanya pamisoro yakaita setekinoroji yekubasa, manejimendi ebasa, uye nzvimbo yebasa yedhijitari. Iye zvakare anoshingairira kubatsira kune akasiyana bhizinesi uye tekinoroji mapuratifomu.
Maitiro ekugadzira Vhidhiyo Yekushambadzira Yemukati Karenda